စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူများမှ လူအများစု မက်လေ့ရှိသော အိမ်မက်9မျိုးနှင့် ထိုအိမ်မက်များ၏ အဓိပ္ပါယ် - LIFESTYLE » Ahmalay
Wednesday, January 11, 2017 Horoscope
အများစုသော စိတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူများမှာ အိမ်မက်များကို ဘာသာပြန်ခြင်းအပေါ် လက်လျှော့ထားကြပြီး အမှန်တကယ် ကြိုးစားဖော်ထုတ်လိုသော စိတ်ပညာရှင် တစ်ဦးလည်း ရှိနေပါတယ်။
Wallace လို့အမည်ရတဲ့ စိတ်ပညာရှင်ဟာ နှစ်ပေါင်း၃၀ကျော် အတွင်း အိမ်မက်ပေါင်း 150,000ကျော်ကို ဘာသာပြန်ဆို နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ ကျွန်မတို့ကို လူအများစုမက်လေ့ရှိတဲ့ အိမ်မက်9မျိုး၊ သူတို့၏ အဓိပ္ပါယ် နှင့် နိုးထလာသောအချိန်တွင် သင်လုပ်ဆောင်သင့်သော အရာများကို ကောက်နုတ်ရှင်းပြ ခဲ့ပါတယ်။
9. အခန်းအိုဟောင်းကြီးအား မြင်မက်ခြင်း
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: အိမ်တွင်းရှိ အခန်းများက သင့်စရိုက်များအပေါ် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖော်ပြကြပါတယ်။ ဒီတော့ အခန်းအိုကြီးတစ်ခုအား သင်မြင်တွေ့သည်ဆိုပါက သင်ယခင်က သတိမထားမိခဲ့သော စွမ်းရည်တစ်ခုအား ရှာဖွေ တွေ့ရှိခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: Wallace ရဲ့အဆိုအရ သင်ဟာသင့်ရဲ့ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ စွမ်းရည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းကြောင့် လက်တွေ့ဘဝ တွင် အခြားသော စွမ်းရည်အသစ်များကို ထပ်မံတွေ့ရှိလေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
8. ယာဉ်နှင့်ပတ်သတ်ပြီး ထိန်းချုပ်မရသော အိမ်မက်များ
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: ကားများဟာ သင့်တွင်ရှိနေသော တိုးတက် မှုများကို အသေးစိတ်ရည်မှန်းချက်ဖြင့် ရှေ့ကိုဆက်ရန် ရည်ညွှန်းသည်။ လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဟာ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ လျှောက်လှမ်းရန် လုံလောက်သော ထိန်းချုပ်မှု မရှိခြင်းကဲ့သို့ ခံစားရပါလိမ့်မည်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: Wallaceရဲ့ အဆိုအရ မိမိကိုယ့်ကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုထိန်းချုပ်မည့်အစား စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး မိမိသွားရန် အကောင်းဖြစ်မည့် လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ကာ ဦးတည်မောင်းနှင်သင့်သည်ဟု ဆိုပါတယ်။
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: မိမိကိုယ်ကို အမြင့်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျသည်ဟု ခံစားရခြင်းမှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဟာအခြေအနေ တစ်ခု ချင်းစီတိုင်းကို လိုအပ်သည်ထက် ပို၍စိတ်နှစ်ကာ ခံစားနေခြင်း ပင် ဖြစ်သည်။သင်လိုအပ်သလောက် အနားယူသင့်ပြီး ထိုကိစ္စများကို အဝေးသို့ပို့လိုက်ပါ။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: အရာအားလုံးကို လိုအပ်သည်ထက် ပိုကာစိုးရိမ်နေမည့်အစား တစ်ခါတရံ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်တစ်ပါးသူ အပေါ်ယုံကြည်မှု အပြည့်ထားကာ သဘာဝအရ သူ့အလိုအတိုင်း ရှိနေစေသင့်သည်။
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: အမြင့်သို့ပျံသန်းခြင်း ဆိုသည်မှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် ကာလရှည်ကြာ သင်ဆုတ်ကိုင်ထားသော အရာတစ်ခုအား သင်လွှတ်မြောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: Wallance ရဲ့အဆိုအရ သင့်စိတ်တွင် ယခု လိုအိမ်မက်မျိုး မြင်မက်ခြင်းဟာ ကံကောင်းခြင်း(သို့မဟုတ်) တိုက်ဆိုင်မှုဟု သင်ထင်နိုင်သော်လည်း တကယ်တမ်းမှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဟာကြီးမာသော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု (သို့မဟုတ်) လေးလံသော တာဝန်ကြီးတစ်ခုမှ သင်ဟာ လွတ်မြောက်သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
5. ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားသော စာမေးပွဲ
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: စာမေးပွဲဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ အရည်အချင်းကို အကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆိုလိုရင်းမှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဟာ မိမိကိုယ့်ကို အကဲဖြတ်နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: မိမိကိုယ်ကို အဆုံးမရှိသော စာမေးပွဲ များ စစ်ဆေးနေမည့်အစား စစ်မှန်သော စာမေးပွဲဆိုသည်မှာ မိမိတွင်ရှိနေသော စွမ်းရည်ကို လက်ခံသိရှိပြီး မိမိ၏ အသိပညာ ဗဟုသုတများနှင့် အောင်မြင်မှုများ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။
4. လူကြားထဲတွင် ဗလာနတ္ထိဖြစ်နေခြင်း
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: အဝတ်အစားများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအများကို မြင်စေလိုခြင်းကြောင့် အဝတ်အစား များကိုဝတ်ဆင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ လူကြားထဲတွင် ဗလာနတ္ထိဖြစ်နေခြင်းမှာ လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဟာ နာကျင် ခံစားနေရသူ ဖြစ်ပြီး လူအများကို သိစေလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: တစ်ခါတရံမှာ ရှက်စရာဖြင့် ကြုံနေရပေမယ့်လည်း အခြားသူများနှင့် ပွင့်လင်းစွာ ဆက်ဆံ ခြင်းဖြင့် သင့်တွင်ရှိသော စွမ်းရည်များကို ဖော်ထုတ်ပါ။
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: အိမ်သာဟာဆိုရင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ် ဘဝသန့်ရှင်းမှုအတွက် အခြေခံကျကျလိုအပ်သော အရာတစ်ခု ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဆိုရင်တော့သင်ဟာ သင့်လက်ရှိဘဝတွင် လိုအပ်နေသော စိန်ခေါ်မှုများကို ရှာဖွေ နေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: အခြားသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို စောင့်ကြည့်နေမည့်အစား သင့်လိုအပ်ချက်များကို ရှာဖွေရန် အချိန်ကို အသုံးချပါ။
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: သင့်ရဲ့သွားတွေဟာ သင့်ယုံကြည်မှုနှင့် အစွမ်းအစကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ လက်တွေ့ဘဝတွင်တော့ သင့်ယုံကြည်ချက်များ ပျက်စီးရခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။
သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲ: သင့်ကိုအားလျော့စေသော အရာများကို တွေးနေခြင်းထက် ထိုအရာများကို သင်ခန်းစာ ယူကာ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ကျော်လွှားသင့်သည်။
ဆိုလိုရင်းကဘာလဲ: သင့်လက်တွေ့ဘဝတွင် သင်ဟာ အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို ရင်ဆိုင်ချင်သော်လည်း မည်သို့ ရင်ဆိုင်ရမည်ကို မသိခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာလုပ်သင့်သလဲ: ဒီကိစ္စဟာ တစ်ခါတရံဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ရည်မှန်းချက်ကို ဖမ်းဆုတ်နိုင်ရန် အခွင့်အရေး ကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံမှာ ကြောက်လန့်နေတတ် ပေမယ့် သင့်ကိုလိုက်ဖမ်းနေသည့် အရာတွေက သင်သတိ မထားမိဘဲ သင့်တွင်ရှိနေ သော အစွမ်းအစများကို သတိပေး လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။